ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ကြိုဆိုသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား တူရကီ ကျေးဇူးတင်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမှန်တကယ် လက်ခံထားရသည့် ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၄-သန်းကျော်ရှိဟု တူရကီပြော။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုမင် တူရကီ၌ ရောက်ရှိနေ – H2Oupdatenews
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား ကြိုဆိုသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား တူရကီ ကျေးဇူးတင်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အမှန်တကယ် လက်ခံထားရသည့် ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း ၄-သန်းကျော်ရှိဟု တူရကီပြော။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုမင် တူရကီ၌ ရောက်ရှိနေ
oungmarine11@outlook.com 15/09/2020	No Comments
ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်းရိုဟင်ဂျာ ဟုဖော်ပြ ) များအား လက်ခံရန် အားထုတ်မှုအတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအား တူရကီအစိုးရ၏ သံတမန်ရေးရာ ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ချီးကျူးလိုက်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအား လက်ခံထားပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အေကေ အဗ္ဗဒူမိုမန်နှင့် ပူးတွဲကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မဲဗလုဗ် ချောင်ရှိုလိုက ပြောဆိုသည်ဟု တူရကီနိုင်ငံပိုင် Anadolu News Agency က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
တနင်္လာနေ့ တူရကီနိုင်ငံမြို့တော် အန်ကာရာတွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံသော တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုရာ၌ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက် ကြီးမားသော ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ရသည်ကို တူရကီက သိရှိကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည် ၄ သန်းကျော်ကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံထားရကြောင်း၊ ထိုအတွက် တူရကီက အလေးအနက် အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း ရှင်းလင်းသည်။
တူရကီသည် မိမိ၏အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့နှင့်အတူ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများနှင့်အတူ ရပ်တည်ခြင်းဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အား ကူညီလျှက်ရှိကြောင်း၊ တူရကီ၏ ပူးပေါင်းရေးနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (TIKA) သည် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများအတွက်အပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကိုလည်း အထောက်အပံ့များ သိသိသာသာပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဒါကာအစိုးရ၏ အကူအညီတောင်းခံမှုကြောင့် အကူအညီများ တိုးချဲ့ခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတ အာဒိုဂန်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အသက်ရှူကိရိယာများအပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်ကာလများတွင်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့နှင့်အတူ ရပ်တည်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲသတင်း ထုတ်ပြန်စဉ် ချောင်ရှိုလိုက ပြောကြားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုမန်က ပြောဆိုရာတွင်မူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့် တူရကီတို့သည် သမိုင်းကြောင်းဆက်နွယ်မှု၊ ဘာသာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများအရ ညီအစ်ကို နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းသောကမ္ဘာနှင့် သာယာဝပြောသည့် မူဆလင်ကမ္ဘာအပေါ် ဘုံရည်မှန်းချက် အခြေခံထားရှိကြကြောင်း၊ တူရကီသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီအကြပ်အတည်း၌ ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့်အတူ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ပထမဆုံးဆေးရုံကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါကြောင်း ထည့်သွင်း ရှင်းလင်းသည်။
ချောင်ရှိလိုကလည်း အစ္စလာမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC) ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်နိုင်ငံသည် OIC အဖွဲ့ကြီးတွင် စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ်က အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ D-8 အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက် ၍ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ပြီး D-8 အဖွဲ့ကြီးကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁-ဘီလျှံခန့်ရှိနေသည့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကို ၂-ဘီလျှံရောက်အောင် တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
၁၉၉၇၊ ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ထိုစဉ်က တူရကီ ဝန်ကြီးချုပ်နက်မက်တင်အီဘာခန်က မွတ်စလင်ကမ္ဘာမှ ၈-နိုင်ငံ ပါဝင်သော စီးပွားရေးအုပ်စုတစ်ခုတည်ထောင်ရန်အဆိုပြုအရ D-8 အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အီဂျစ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ မလေးရှား၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ပါကစ္စတန်နှင့် တူရကီတို့ ပါဝင်ကြသည်။
(( Fanicial Express ( Sept. 12,2020 ) အရ စက်တင် ဘာ ၁၄-ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး အဗ္ဗဒူမိုမန်သည် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီပြဿနာ၊ D-8 အဖွဲ့ရေးရာတို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် တူရကီ နိုင်ငံ အန်ကာရာမြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သည် ယခုနှစ်တွင် D-8 ၏ အလှည့်ကျ သဘာပတိ ဖြစ်ပြီး မတ်လတွင် ကျင်းပမည့် D-8 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ကူစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် နှောင့်နှေးလျှက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
((( Anadolu., 14.09.2020,” Turkey hails Bangladesh for hosting Rohingya refugees. By: Burak Dağ,Seda Sevencan.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန် ဆိုသည်။ )))
Previous Previous post: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးတွင် မြန်မာက အင်အား ၂၅၀၀ ကျော် တပ်ဖြန့်ချ ထားဟု ဒါကာထောက်လှမ်းရေးအား ကိုးကား၍ ဘင်္ဂလားမီဒီယာပြော။ ဒုက္ခသည် ဘင်္ဂါလီများ အား ပြန်မခေါ် လိုခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုထိန်းချုပ်ရေးကို အကြောင်းပြဟု သုံးသပ်ကြ
Next Next post: “ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး …. ဒို့အရေး … ဒို့ အရေး ““ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်စံနစ် …. အလိုမရှိ … အလိုမရှိ “